Xog: Yaa ka dambeeya in si hoose loo joojiyey mooshinkii saldhigga Berbera? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Yaa ka dambeeya in si hoose loo joojiyey mooshinkii saldhigga Berbera?
Xog: Yaa ka dambeeya in si hoose loo joojiyey mooshinkii saldhigga Berbera?
Muqdisho (Caasimada Online) – Dib u dhac aad u weyn ayaa laga dareemayaa qorshihii mooshinka ka dhanka ahaa saldhiga Imaaraatka Carabta ee dekada magaalada Berbere, mooshinkaasi oo ay wadeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Inkastoo mooshinka laga hor aqriyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa haddana waxaa hareeray baarlamaanka dood, waxaana dib loo dhigay ka doodista mooshinka ka dhan ah saldhiga imaaraatka.
Xogo ay heleyso Caasimada Online ayaa sheegaya in mooshinkaasi loo hakiyay sababo la xiriiri inay socdaan qorshe la doonayo in looga tanaasulo gebi ahaanba mooshinka xildhibaanada ay soo gudbiyeen oo ay wadaan xubno dowladda ka tirsan.
Maxamed Axmed Alcuthmani oo la kulmay afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari ayaa wuxuu kala hadlay sidii loo joojin lahaa mooshinka ka dhanka ah imaaraatka carabta iyo qorshaha ay la leedahay saldhiga meletari.
Waxaa jira warar sheegaya in dhaqaale xooggan lagu bixinayo in mooshinka la fashiliyo, ayna hadda taas u muuqata mid dhaceysa, waxaana arrintan xoogeeda wada Jawaari. Lamana oga inay madaxda dowladda wax ka ogyihiin.
Xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa wali wadda qorshaha mooshinka, laakiin waxaa muuqaneysa in madaxda dalka ay qeyb ku leeyihiin sidii loo dhiciseyn lahaa mooshinka.